Çawa Mirovan Bi Spam Bi Rêveberiyê E-Mail: Serpêve Ji Semalt
Ny media sosialy dia lasa fitaovana tena ilaina amin'ny fampielezana hevitra hevitra an-tserasera. Ny hevitra 50.000 novinavinan'ny olona tsirairay isan'andro dia tombontsoa lehibe hananganana ny fampahalalam-baovao an-tserasera na dia kely aza ny fampiharana ny SEO, fa raha toa ka misy dikany ny votoatiny. Hevitra tsara mitombo ny fifamoivoizana amin'ny aterineto Ireo mpitsidika tranonkala dia mamaky ny vaovao ary mizara izany amin'ny alalan'ny sehatra an-tserasera.
Jason Adler, Tale Mpitantana Success Success of Semalt Digital Services, dia milaza fa ny dingana amin'ny fananganana votoaty mahafinaritra izay manintona mpihaino tena iray dia mangataka ny mpijery mba hankasitraka ny fandraisan'anjaran'ny fanehoan-kevitra. Ny sasany amin'ireo fomba ampiasain'ny mpanatrika hizara tranonkala iray dia ahitana ireto fanehoan-kevitra manaraka ireto:
Spamming: Ny votoaty izay tsy ara-dalàna ary tsy mandray anjara amin'ny fangatahan'ny mpijery dia miteraka fahombiazana ho lazaina ho tsy misy ilana azy ary noho izany aza spam. Ny fanimbana ny votoaty dia manafoana izany amin'ny fifandraisana amin'ny ho avy miaraka amin'ny mpampiasa tranonkala.
Mandingana: Ny mpandika lahatsoratra iray mampifangaro ny zavatra ilaina sy tsy misy dikany amin'ny pejy Internet dia manome fotoana ho an'ny mpamaky. Ny mpampiasa dia mamoaka ny votoatiny tsy ilaina mba hahitana izay mahasoa azy. Raha toa ka mahantra hatrany ny votoaty dia soratana amin'ny farany ny mpanoratra.
Famerenana: Raha toa ilay mpamaky miahiahy ny maha-zava-dehibe ny votoaty ao anaty tranonkala, dia mamaky maika izy ireo haka izay zavatra manan-danja rehefa mandingana ny ambiny.
Najanona: Raha toa ka manohina ny mpamaky ilay lahatsoratra dia mety tsy hitsahatra hibanjina ilay zavatra vakiana izy ireo ary hifantoka amin'ny olany manokana na matihanina.
Fananganana: Ny votoatiny tsara voamarina na fitsidihana ho avy dia mendrika ny hamonjy amin'ny fitadiavana haingana.
Fanovana: Misy votoaty mampihetsi-po mahakasika ny soatoavina sy ny toetran'ny mpamaky. Ny toe-tsainy sy ny fomba fisainany amin'ny fiainana andavanandro.
Fandefasana: Afaka mizara ny votoaty ny mpamaky raha mahatsapa fa tsy manampy azy ireo fotsiny fa ho an'ny olon-kafa ihany koa.
Miparitaka: Manitatra ny votoaty manitatra amin'ny blaogy sy ny media sosialy. Ny votoaty dia mahatratra olona maro amin'ny alàlan'ny sehatry ny media manokana.
Fanoratana: Rehefa mahafa-po ny votoaty ny mpamaky, ny endriny matotra amin'ny fanehoana fahatokiana dia ny fidirana amin'ny tranokalan'ny fananana bebe kokoa amin'ny ho avy.
Misy ny fiheverana vitsivitsy alohan'ny handefasana votoaty an-tserasera raha tokony handray valiny tsara izy.
1. Fantaro ny mpihaino
Ny fahalalana ny mpanatrika dia fototra iray amin'ny fiarovana ny votoatin'ny mpamaky. Tokony hifantoka amin'ny mpanatrika ny mpanoratra fa tsy ny mpanoratra. Fantaro hoe iza no mpihaino, ny tombontsoany sy ny fiahiany amin'izao fotoana izao.
2. Fantaro ireo tanjona
Eritrereto ny tanjon'ny votoaty ary ataovy ny fanombanana ny mpamaky ny lahatsoratra raha toa ka hampihatra ny SEO.
3. Mampiasà famoronana
Rehefa avy nahazo ny fanazavana fototra momba ny fitaovana sy ny mpihaino, ny fifantohana amin'ny fahaiza-mamorona dia mamorona votoatim-pampana mifanaraka amin'ny tanjona napetrany. Ny famoronana dia miteraka fahendreny amin'ny votoaty sy hevitra izay mifanaraka amin'ny fitakian'ny mpanatrika. Ny lahatsoratra dia tokony ho manan-danja sy amin'ny halavany ary hampiakarana amin'ny alalan'ny SEO.
4. Hajao ny Feedback
Aorian'ny famoahana ny votoaty aty anaty aterineto, valio ny valinteny avy amin'ny mpanatrika mba handinihana ny valiny. Ampifandraiso amin'ny valinteny amin'ny hoavy ny fanamarihana sarobidy rehefa mandray mpitsikera mba hanatsara. Ny mpanatrika dia maneho ny fihetseham-pony amin'ny alalan'ireo asongadina etsy ambony.
Mahaiza mamorona, manaraha ny mpihaino ary ampiharo ireo SEO mekanisma mba hampitombo ny fisian'ny aterineto Source .